प्रदेश ५ को कोभिड १९ व्रिफिङको जिम्मेवारी स्वास्थ्य महाशाखाका डा. पुष्पराज पौडेललाई • Health News Nepal
बुटवल ,३१ साउन २०७७
प्रदेश ५ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले दैनिक रुपमा गर्ने गरेको कोभिड १९ सम्बन्धी व्रिफिङको जिम्मेवारी स्वास्थ्य महाशाखाका डा. पुष्पराज पौडेललाई दिएको छ ।
कोरोना संक्रमित अधिकारी बिहीवार साँझसम्म मन्त्रालयकै कोरोना रोकथाम र सूचना अपडेटको काममा खटिएका थिए । कोरोना पुष्टि भएपछि उनि शुक्रबार मन्त्रालयमा आएका छैनन् । उनि होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाकै अधिकारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि शुक्रवार मन्त्रालयका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालका साथै अन्य कर्मचारीको समेत स्वाव संकलन गरिएको छ ।